Hkum Sum Hpa
Here For U :)
Tsaw Ai Majaw
Sha Na Da Rit
Sa Du Ai Ni
Thanks for let us live
Posted by Shanghtin at 15:41
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီသတင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ သင်တို့ဆီသို့Power Point
Presentation, Life is beautiful ဆိုပြီးမေးလ်တစ်ခုဝင်လာပါခဲ့လျှင်
မဖွင့်ပါနှင့် ချက်ချင်းdeleteလုပ်ပစ်ပါ။ သင်ထိုမေးကိုဖွင့်ခဲ့မိလျှင်
သင်၏computer secreen တွင် It is too late now, your life is no longer
beautiful ဆိုသည့်စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်၏PCမှအရာအားလုံးပျောက်
ဆုံးသွားပြီး ဒီမေးလ်ကိုပို့သူထံ သင်၏ အမည်၊ e-mail နှင့် password
အားလုံးရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ သည်အရာသည် အင်္ဂါနေ့ နေ့လည်က စတင်ခဲ့သော virus
အသစ်ဖြစ်ပါသည်။ Virus ဖန်တီးသူကတော့ life owner ဟု မိမိကိုယ်ကို
Posted by Shanghtin at 15:30
Romania ni garum hpyi laika
Sara hte Netherland Jinghpaw Wunhpawng Hpung masha ni hpang de,Romania du Jinghpaw Wunpawng myu sha tsinyam ni hku nna, ndai laika kadun mi hte garum hpyi dat ga nngai.
Romania mungdan asuya hku nna August 1ya shani hta garum gumhpraw jaw na matu ga sadi jaw da ai. Rai tim August 31 ya shani hta she garum gumhpraw jaw wa ai. Lang lang ga sadi hprai let jaw ai garum gumhpraw( Support Money) gaw tup hkrak nre taw ai hta n-ga, hkoi shap ai (Loan Money) re ai nga nna tsun shapraw wa ai. Dai lam hpe nsan lang ai majaw anhte hku nna lit nga ai masha kaba ni hte hkrum shaga mayu ai ngu hpyi shawn da ga ai.
Lit nga ai masha kaba ni hte galoi ten hta she lu hkrum na hpe nchye lu shi ga ai re majaw ndai laman anhte ni hta malu masha hte seng nna yak hkak ai lam ni hkrum nga ga ai. Bai nna ndai shata laman hta ma shangai na ma hkum ( Pregnant Women) mare lahkawng mung nga ga ai. Matut nna ma shangai shaprat wa na ma hkum mare manga mung naw nga ai majaw, anhte hta yak hkak hkrum nga ai lam hpe garum hpyi shawn dat nngai.
MKBC hpung masha ni hpe Karai Kasang tut nawngeshaman chyeju jaw u ga.
Kyu hpyi myit dum let,
Romania Jinghpaw myusha tsinyam
Posted by Shanghtin at 15:27
Email kaw na shana ai lam re
Hkau hkamja nga na re ngu kam ai .Ngai mung zeng sha re Shiga langai mi sha na dat na .Myen ni gaw anhte shanglawt hpyen la / du salang ni mahkra hte shanhte ni hte seng ang n'ta masha niajahpan hpe mare salang ni kaw hpyi nga ma ai.Dai hpang jahpan lu ai hte myu kata kaw na ni hpe rim na, lu rim yang mung hkyam sa njaw na ,shing n'rai shanhte kata de latnak(gun) jahkrat n'na shang wa yang hkap lana,wunpawng mungdan nga n'na gara hku mung n'lu jaw ai ..simsa lam
mung n'nga sai moi na zawn sha bai rai mat sai, kasat sha mit kau na nga n'na shan hte kata kaw tsun ndau ai .Bai n'na Duka ba nban la hpe mung myen mung na tara shang maigan pru n'na bai n'shang wa ai ,Miwa mung hku shanglawt dup de wa ai majaw "pi pe hku na ndau ai sha n'ga 'KIO/KIA hpe mung maigan de woi hprawng mat sai myen mung hte n'seng
sai KIO/KIA mung pi pe rai sai"nga n'na myitkyina myu ne chyan hkai ye pati na amu madu (U ngyu win) nan 7.9.2010 shani hkyin 1:30mp kaw galaw ai zahpawng hta tsun ai.
Posted by Shanghtin at 15:24
- ရခိုင်ကို အထင်သေးမိလို့ ဗမာဦးခေါင်းအနောက်ကို ညွှန့်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့ ရခိုင်ကို ဘယ်တော့ခါမှ အထင်မသေးနဲ့။ ဤအတိတ်က ဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး သတိထားရမယ်။ ရခိုင်တွေဟာ ရာဇ၀င်ကြီးသလောက် မာနကြီးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အထင်ကြီးတဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းကြွေး မဆပ်နိုင်အောင်၊ နာလံမထူနိုင်အောင် မင်းတို့တတွေ စွမ်းဆောင်တတ်ရမယ်။
- ရှမ်းဆိုတဲ့ လူတွေကလည်း တောင်ပေါ်မှာနေ တောင်ပေါ်သား။ သူတို့ အထက်ကဆိုရင် ငှက်ပျံသွားတာကိုတောင် မလိုချင်ဘူး။ မလျှော့တဲ့ဇွဲ၊ လုံ့လဟာ ရှမ်းတွေမှာ ရှိတယ်။ ဗမာတွေကို ရာဇ၀င်ကြည့်ပြီး ဓားသွေးတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ဒီပြဿနာ ပေါ်လာမယ်။ တောင်ပေါ်သား အသိထက် မကျော်လွန်စေဖို့ ကြပ်ကြပ်သတိထားရမယ်။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကြီးထွားလာခဲ့ရင် ဗမာ့ရန်သူပဲ၊ ပြတ်သားတဲ့နည်းကို ကျင့်သုံးရမယ်။
- ကရင်ဆိုရင်လဲ တို့တတွေရဲ့  စိတ်မချနိုင်တဲ့ စကားပြောရင် ပြောသလို လုပ်တတ်တဲ့ ၀ါဒရှိတယ်။ ဒါဟာ ရန်သူတစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ရဲ့  ဘ၀ကို မြေတောင်မြှောက်မပေးနဲ့။ လက်မြန်ခြေမြန်ဝါဒရှိတယ်။ သတိလစ်ရင် လစ်သလို ဗမာတွေ အသက်ရှူကြပ်လိမ့်မယ်။
- ဓါးရှည် ဓါးချွန်တွေကို ကိုင်ပြီး ရေခဲတောင်ပေါ်မှာ ပျော်ပိုက်တဲ့ ကချင်တွေကလည်း မန္တလေးကိုတောင် သူတို့မြို့ ဆိုပြီး တောင်ဘက်တခွင်ကို သူတို့ဒေသဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်။ သူတို့က ပင်လယ်ငါးကို စားမယ်တဲ့။ မင်းတို့ ဗမာတွေရဲ့  သခင်ဘ၀ကို ရောက်အောင်ဖန်တီးမယ်တဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့တတွေဟာ လက်ဦးထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ မညှာနဲ့။ ညှာရင်နာမယ်။ ဗမာတွေ သတိထားကြ။
- သမိုင်းရှည်ပြီး တိုးတက်ခဲ့တဲ့ မွန်တွေကလည်း ကနေ့ဆို ဗမာလက်အောက်မှာ ရောက်နေပေမယ့် ဒဂုံဆိုတာ မွန်စကားဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆိုတာ မွန်ပြည်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အတိတ်က သူပိုင်တယ်။ ငါပိုင်တယ် ဆိုတာက ဗမာတွေနားမလည်ဘူး။ လက်ရှိမှာ လယ်လိုရှိနေသလဲ။ ရှိနေသလို သိမ်းထားရမယ်။ မွန်ဆိုတာ သည်းမခံတတ်ဘူး။ မလိုလားရင် တော်လှန်တတ်တယ်။
- ထားဝယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးကလည်း ရှိသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ လူနည်းစုတွေပဲ။ ဒါပေမယ့် အထင်သေးလို့မဖြစ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့  သမိုင်းကြွေး ရှိနေတယ်။ သူတို့တွေဟာ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ငါတို့ဗမာတွေကို အန္တရာယ်ပြုလာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကောင်တွေကို တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မပူးပေါင်းမိအောင် မင်းတို့ကြိုးစားရမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ထားဝယ်လူမျိုးတွေကို ပျူနဲ့ကမ်းယံတွေလိုပဲ မျိုးပျောက်သွားအောင် ငါတို့လုပ်ဆောင်ရမယ်။ ဆိုလိုတာက ငါတို့ဗမာအမျိုးသားတွေဟာ ထားဝယ်အမျိုးသမီးတွေကို ရတဲ့နည်းနဲ့သိမ်းသွင်းပြီး လက်ထပ်ယူရမယ်။ ရန်သူကို ကြီးသူဖြစ်စေ၊ ငယ်သူဖြစ်စေ ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးကြနဲ့ ငါမှာချင်တယ်။
- ဒေါင်းအတောင်ခပ်ရင် တောရှင်းရမယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒေါင်းအတောင်အောက်က မလွတ်စေရဘူး။ ဒေါင်းအလံကို ငါသိတယ်။ ဒေါင်းကို ပယ်ရင် ဘာကိုမှ ငါမလိုလားဘူး။ ငါတို့ဗမာတွေကလည်း သူတစ်လူ။ ငါတစ်မင်းနဲ့ ညီညွတ်မှု မရှိဘူး။ အချင်းချင်း ညီညွတ်မှုရှိမှသာ သာယာမယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း မကျေနပ်တာကို နိုင်ငံရေးမှာ မရောထွေးသင့်ဘူး။
- ဒါကြောင့် ငါမသေခင် နောက်ဆုံး မှာထားခဲ့ချင်တယ်။ ဒါကို ငါတို့တတွေ မစောင့်ထိန်းရင် သူ့ကျွန်ဖြစ်မယ်။ ဗမာဟာ ဗမာပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဗမာတွေရှိနေသရွေ့  ထာဝရရှင်သန်နေမယ့် ကတိတစ်ခု ငါတောင်းချင်တယ်။ မင်းတို့ကတိပေးရင် ငါသေပျော်ပြီ။ သို့မဟုတ်ရင် ငါသေမပျော်ဘူး။ တမလွန်ဘ၀ကလည်း ငါတို့ဗမာတွေ ကျွန်ဖြစ်နေတာကို မကြည့်ချင်ဘူး။ ဗမာတွေ အချင်းချင်း ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးကို တစ်ခြားလူမျိုးတွေဆီကို မရောက်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အခါ ဗမာတွေ အချင်းချင်း သွေးစည်းပြီး တစ်ပါးရန်ကို ကာကွယ်ရမယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ သူတစ်လူ၊ ငါတစ်မင်း ၀ါဒကို စွန့်ရမယ်။ ( သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း )
မြန်မာပြည်မှ တိုင်းရင်းသားတိုင်း လူမျိုးတိုင်း လွတ်လပ်ရေးရကြပါစေ။
ကြယ်နီ ( Red Star )
Posted by Shanghtin at 03:17
တစ်ဘက်သားကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးပေးမှုကို ပြသနေသလိုပါပဲ။ ဖုန်းလေးတစ်ချက်နဲ့ "အလုပ်ပင်ပန်းလား?"ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်တဲ့ အမေးလေးမေးနိုင်သလို "မိုးအေးပြီနော်... အနွေးထည်ထပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်"ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေးလည်း ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဂရုစိုက်မှုတွေက တစ်ဘက်သားအတွက် တကယ့်အသုံးမနိုင်ဝင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူ့စိတ်ကို နွေးထွေးကြည်နူးစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စကားပြောကောင်းတဲ့ချစ်သူက "ငါဟာ မင်းအတွက်မွေးဖွားလာတာပါ" လို့ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုတွေရှိကြတယ်။ တစ်ဘက်သားကို အလွန်အကျွံ မှီခို၊ အားကိုးတာက သူ့ကိုတာဝန်ပိုစေတဲ့အပြင် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။
သင့်တင့်တဲ့ မနာလို၊ သဝန်တိုမှုတွေက သူဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း တစ်ဘက်သားကို ခံစားစေတယ်။ သဝန်တိုဖို့ အကျိုးအကြောင်းညီမျှရမယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အကျိုးအကြောင်း အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ သဝန်တိုမှုတွေက တစ်ဘက်သားကို မလိုလားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ချစ်တာနဲ့ နှစ်သက်တာမတူပါဘူး။ ချစ်မိပြီဆိုရင် တစ်ဘက်သားအတွက် အရာရာပေးဆပ်ရဲပါတယ်။ "ချစ်တယ်"ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းက တခြားတန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေထက် တစ်ဘက်သားရဲ့ရင်ကို နွေးထွေးကြည်နူးစေပါတယ်။
အကြောင်းက ငယ်ရွယ်စဉ် ရည်းစားထားချိန်မှာ ကလေးဆန်စိတ်တွေ များနေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ အဆင်ခြေမရှိ စူစူအောင့်အောင့် မကြီးပြင်းတတ်တဲ့ကလေးကို အမြဲအလိုလိုက် ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူရင့်ကျက်ရင် အချစ်လည်းရင့်ကျက်ပြီး လှပတဲ့အဖူးအပွင့်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖူးပွင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ချစ်စကြင်စမှာ လူတွေက ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ အနာအဆာကို သိုဝှက်ပြီး ဟန်ဆောင်နေတတ်ကြတယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေက နှစ်ကြာမှ တဖြေးဖြေး ပေါ်လာတတ်တယ်။ ချစ်စတည်းက ပကတိအတိုင်းချစ်မယ်၊ သဘာဝအတိုင်း ဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းခဲ့ရင် အချစ်က ပိုတာရှည်တည်မြဲမှာဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တဲ့အရာတိုင်းကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ စိတ်ပျက်သွားတဲ့အမှုအရာမျိုး၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ထုတ်မပြသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအပြုအမှုတွေက သူ့ကို စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်တဲ့အသွင်နဲ့ လက်ခံပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ဦးသားရဲ့ အကြင်နာကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေပါတယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့ အမူအကျင့်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ အထီးကျန်ပြီး ဆက်ဆံရေးမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီး တွေးတောခံစားပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဘက်သားကို ပိုနားလည်စေနိုင်ပါတယ်။
အချစ်မှာ ဖြောင့်မှန်၊ မှန်ကန်ခြင်းတွေ အဆတစ်ရာလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို "အပြောသမား" တစ်ယောက် မဖြစ်စေချင်သလို သူကလည်း ကိုယ့်ကိုဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချင်းချင်း အချစ်ညာစားသူ မဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး။
နှစ်ယောက်အတူနေချိန်မှာ ငြင်းခုန်မှုက ရှိစမြဲဖြစ်တယ်။ နောက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ် အလျော့ပေးတာက ဒေါသမုန်တိုင်းကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြဿနာကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိခင် "လမ်းခွဲကြရအောင်" ဆိုတဲ့စကားကို အလွယ်တကူမပြောမိဖို့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တွေငြိမ်သွားမှ ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေ ရှာတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
လူတွေက အချစ်ကို အမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုကြပါတယ်။ ဖွဲ့ဆိုကြတဲ့အထဲမှာ အချစ်တာရှည်ခိုင်မြဲဖို့၊ ချစ်ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူး သာယာဖို့ အဓိကထား ရေးဖွဲ့ကြပါတယ်။ အချစ်အက္ခရာ A to Zကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာနဲ့ ဖတ်ဖူးကောင်း ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အချစ်က ဘယ်တော့မှ ဘာသာပြန်ဆိုလို့ ပြီးနိုင်မယ့်အရာမဟုတ်တာကြောင့် အဲဒီအချစ်တွေကိုပဲ ကျွန်မက ထပ်ဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်။ အချစ်အက္ခရာ A to Z လက်ခံသည်ကပဲ စမှတ်စခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး ချစ်နိုင်ကြပါစေ...
လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
လှည့်ပတ်လိုခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
မေတ္တာဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံး မြေသြဇာပါ။ တစ်ခွန်းတည်းသော စကားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြင်နာ မေတ္တာတွေပါရင် ညိုးနွမ်းနေတဲ့ ဘ၀ကိုတောင်ရှင်သန်စေပါတယ်။
သေးငယ်သောအမှုကိစ္စတို့တွင် ကတိသစ္စာမရှိသောသူသည် ကြီးသောအမှုကိစ္စတို့တွင်လည်း ကတိသစ္စာရှိလိမ့်မည် မဟုတ်။
Posted by Shanghtin at 07:21
Tsaw Ra Myit Hpe Nang Gara hku Mu Ai :)
သင့်ရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာရော ပုစဉ်းလေးတစ်ကောင် နားခဲ့ဖူးသလား….?
သင်ကော ပုစဉ်းလေးတစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလား……?
စာကြွင်း~ ဖတ်မိတာလေးတွေထဲက သဘောကျတဲ့ စုဗူးက ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။
Posted by Shanghtin at 05:54
Ah Ten LaDaw